राष्ट्रपतिलाई विवादमा नतानौं, यो मुलुकका लागि खतरा हनेछ ! | Suvadin !
राष्ट्रपति व्यक्ति होइन, संस्था हो, ख्यालख्यालमा खतरा नमोलौं
राष्ट्रपतिलाई विवादमा नतानौं, यो मुलुकका लागि खतरा हनेछ !
यसरी पटक-पटक राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्‍ने काम भइरहँदा पनि सरकार र सम्बन्धित निकाय मौन रहेको छ । राष्ट्रपतिका प्राय सबै कामहरु नेपाली सेनाले हेर्ने गरेको छ । यस विषयमा कुनै कोणबाट सेनाले पनि चलखेल गरेको त होइन भन्‍ने शंकासमेत पैदा गरेको छ । नेपाली सेनाले राजनीतिक दलको अपरिपक्‍वताको नाजायज फाइदा उठाउने दृष्टता नराखोस् । नपालमा सैनिक शासन लागु हुन सक्दैन । नेपालले लामो समय प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन गरिसकेकोले त्यो सम्भव छैन ।
May 04, 2019 10:12
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा 'मेरो सरकार' सम्बोधन गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २ बमोजिम सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको स्पष्ट छ । शुक्रबार आगामी वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पटक-पटक ‘मेरो सरकार ’ भनेर सम्बोधन गर्दा मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली नागरिकमा नभई आफूमा निहित रहेको सन्देश दिन खोजेको देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । राष्ट्रपतिले यसरी सम्बोधन गर्नु अत्यन्त गैरजिम्मेवार र संवैधानिक मान्यता विपरीत रहेको आलोचकहरुको बताउने गरेका छन् ।
मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेको परिवेशमा समेत राजतन्त्रकालीन झल्को दिने गरी आएको यो सम्बोधनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारप्रति गम्भीर आशंका उब्जाउनु स्वभाविक हो । राष्ट्रपति नेपाली जनताबाटै चुनिएर बनेको संस्था हुँदा राजतन्त्रको यतिसम्म भद्दा नक्कल गर्नु आवश्यक छैन ।
नेपाली जनताले कुनै एक व्यक्तिको नभई नागरिकको सरकारमा विश्वास गर्दछ । त्यसकारण नै हिजोको एकतन्त्रीय राजतन्त्र र राणाको शासन गर्ल्याम्म पारेका हन् ।
यसअघि पनि राष्ट्रपतिलाई विभिन्‍न प्रकरणमा विवादमा तानिएको थियो ।
राष्ट्रपति विवादका श्रृंखला
यसअघि राष्ट्रपति भण्डारी राष्ट्रपति बन्नु अघि देखि नै अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको औपचारिक सवारीमा नागरिकहरूले सास्ती पाएको गुनासो हुने गर्थ्यो । उनी राष्ट्रपति बनेपछि पनि त्यसमा सुधार हुन नसकेपछि भण्डारी आलोचनाको पात्र बन्न पुगिन्।
विदेश भ्रमणका बेला होस् वा औपचारिक सभा-समारोहमा जाँदा, लामो समयसम्म निजी र सार्वजनिक सवारी साधनहरू रोकिने चलनको धेरैले विरोध समेत गरे। सामाजिक सञ्जालमा त राष्ट्रपतिको हरेकजसो औपचारिक भ्रमणमा सवारीकै विषयलाई लिएर व्यापक आलोचना हुने गरेको छ।
करिब दुई महिनाअघि सेना दिवसका अवसरमा काठमाण्डूको भद्रकालीस्थित सैनिक मुख्यालयमा आयोजित रात्रिभोजमा राष्ट्रपतिको 'सवारी' गराउन भन्दै ट्राफिकले सवारी साधनहरू रोकिराखेको थियो। त्यसको विरोध गर्दै केही व्यक्तिहरूले निजी सवारी साधन अघि बढाएर त्यसलाई अवज्ञा गरे।
नागरिकहरूले ट्राफिक प्रहरीलाई नटेरी अवज्ञा गरेको उक्त घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा 'भाइरल' बन्यो। उक्त भिडियो 'भाइरल' भएको केही दिनपछि राष्ट्रसंघीय महिला नियोगको एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी अमेरिका जाँदा भने पहिले जस्तो लामो समयसम्म सडकमा जाम गराइएन।
त्यसलाई कतिपयले नागरिकहरूले गरेको अवज्ञाको असरका रूपमा समेत अर्थ्याएका थिए।
राष्ट्रपति कार्यालय हातामै हेलिप्याड बनाउन लागिएको विषयमा पनि विवादमा तानिइन्। गत भदौमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति कार्यालयसँग रहेको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई काभ्रेको पनौतीमा सार्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णय राष्ट्रपतिको चाहनामा भएको र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान रहेको स्थानमा उनका लागि हेलिप्याड बनाइने समाचारहरू सार्वजनिक भएपछि उनको व्यापक आलोचना भयो। गणतन्त्रात्मक नेपालको राष्ट्रपतिले समेत 'राजा महाराजाको जस्तो सुविधा खोजेको' भनेर आलोचनाको केन्द्रमा परिन् ।
हेलिप्याड प्रकरणसँगै राष्ट्रपतिका लागि महँगा गाडीहरू किन्न लागिएको विषयले पनि उनलाई विवादमा तानेको थियो। सरकारले सेनामार्फत् त्यस्ता 'विलासी' गाडीहरू किन्न लागेको भन्दै धेरैले त्यसको आलोचना गरेका थिए। ती गाडीहरू खरिदका लागि १८ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।
पोखरास्थित विन्ध्यावासिनी मन्दिरमा निर्मित लिफ्टको उद्घाटन गर्न गएकी राष्ट्रपति फेरि विवादमा परेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको पदमा रहेको व्यक्ति एकदमै सामान्य खाले कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन गएको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो। राष्ट्रपतिको मर्यादा राख्न नसकेको भन्दै आलोचको तारो बन्‍न पुगिन् ।
उनी कतार भ्रमणका क्रममा विवादमा तानिएका थिइन् । आफ्नै छिमेकी मुलुकहरू सहित केही देशले कतारमा लामो समयदेखि नाकाबन्दी लगाएर विवादित बनेका बेला भएको उनको उक्त भ्रमणले पनि एकखाले विवाद निम्त्याएको थियो।
केही कूटनीतिज्ञहरूले उनको भ्रमणलाई 'अपरिपक्व' भन्दै सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रतिक्रिया दिएपछि उनी विवादमा परेकी थिइन्।
गत दशैँमा राष्ट्रपतिले लगाइदिएको टीकाले पनि उनलाई निक्कै आलोचित बनाएको थियो। उनले टीका लगाइदिएका केही तस्बिरहरू दशैँको टीका लगत्तै 'भाइरल' भए।
दशैँमा राजतन्त्र कालमा राजाले लगाइदिने जस्तैगरि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतले टीका लगाइदिने चलनकै धेरैले आलोचना गरिरहेका छन्। अझ कम्युनिस्ट राजनीतिबाट सत्तामा आएकाहरूले त्यसो गर्नुलाई धेरैले निको मानेका थिएनन्।
शुक्रबारको नीति तथा कार्यक्रम तयार हुनुअघि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संसद सचिवालयले हेर्ने गर्छ । तीन ठाउँबाट तयार भएर आउने विषयमा वेवास्ता गरिनु गम्भीर विषय हो । विगतका अभ्यासहरु पनि हेर्न सकिन्थ्यो । विगतमा तीन वर्षसम्म लगातार यीनै राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन् । तर यी सबै कुरामा आँखा चिम्लेर वेवास्ता गरिएको थियो । यो राष्ट्रपति कार्यालयलाई विवादमा ल्याउन गलत कार्य हो ।
अत: यस गम्भीर घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी राष्ट्रपतिबाट `मेरो सरकार´ भनाउन भूमिका खेल्नेहरूको बारेमा यथार्थ प्रकाशमा ल्याउन आवश्यक छ । राष्ट्रपतिको पद तथा संस्थालाई व्यक्ति र दलीय घेरा भन्दा माथि उठ्न, नेपाली माटो सुहाउँदो व्यवहार प्रदर्शन गर्न तथा संविधान मातहत रहन आवश्यक छ । राष्ट्रपति एक व्यक्ति होइन, संस्था हो । संस्थालाई यसरी पटक-पटक विवादमा तान्‍नु भनेको मुलुकमा गम्भीर संकट निम्त्याउनु हो ।
नियतवश नै सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता एक व्यक्तिमा निहित गर्न कसैले खोजेको हो भने लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताप्रेमी नागरिकहरू एकजुट भएर नेपालमा सही अर्थमा `नागरिकको सरकार´ स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यक छ । जसले मुलुकलाई फेरि अस्थिरतातर्फ धकेल्‍ने गर्छ । अब मुलुकलाई अस्थिरता चाहिएको छैन । सम्बन्धित निकाय बेलैमा सजग होस् ।